Professional Microsoft Product Key Online Shop by iT Guider - iT Guider
ယ ခု စာ Website မှ တစ် ဆင့်၊ Microsoft ရဲ့ Products တွေ ဖြစ် တဲ့ Items များ အား လုံး ကို ဈေး နှုန်း သက် သာ စွာ နဲ့ ဝယ် ယူ နိုင် ပါ တယ်။
ဝယ် ယူ နိုင် မယ့် ဈေး နှုန်း များ ကို အောက် ပါ စာ ရင်း အ တိုင်း ကြည့် ရှု ကာ ယ နေ့ “DOLLAR” ပေါက် ဈေး နှင့် တွက် ချက် ပြီး ဝယ် ယူ နိုင် မှာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဝယ် ယူ ပြီး ၁၅ ရက် အ တွင်း Keys တစ် စုံ တစ် ခု ဖြစ် လျှင် ငွေ 100% နှုန်း ပြန် အမ်း ပေး ပါ တယ်။
Windows 10 Home Product Key $45
Windows 10 Professional Product Key $50
Windows 10 Professional VOL Product Key $75
Windows7Enterprise Product Key $78
Windows7Enterprise SP1 Product Key $82
Windows7Home Basic SP1 Product Key $36
Windows7Home Premium Product Key $35
Windows7Home Basic SP1 Product Key $38
Windows7Professional Product Key $36
Windows7Ultimate Product Key $38
Windows7Ultimate SP1 Product Key $40
Windows Thin PC Product Key $35
မ ဝယ် ယူ ခင် အ မေး များ ဆုံး မေး ခွန်း များ ကို ဖတ် ရှု ပါ ရန်
ဒီ မှာ ရောင်း ချ နေ တဲ့ Product Keys တွေ က Microsoft ရဲ့ တ ကယ့် Keys အ စစ် တွေ ဟုတ် ရဲ့ လား ?
ဟုတ် ပါ တယ်။ ၁၀၀ % Genuine Microsoft Windows Keys တွေ ကို သာ ရောင်း ချ ပေး တာ ပါ။
ရောင်း ချ နေ တဲ့ Product Keys တွေ က ယာ ယီ သာ သုံး လို့ ရ တာ လား၊ ပြီး တော့ သက် တမ်း ကုန် နိုင် လား ?
သက် တမ်း မ ကုန် ပါ ဘူး။ Microsoft က Supporting ပေး နေ သ ၍ သင် ဝယ် ယူ ထား တဲ့ Keys ရဲ့ သက် တမ်း ဟာ ဘယ် တော့ မှ မ ကုန် ဆုံး သွား ပါ ဘူး။
ဒီ Product Keys တွေ က ရော၊ ဘယ် က နေ လာ တာ လဲ ဗျ ?
ဟုတ် ကဲ့ ခင် ဗျ။ ဒီ Products Keys တွေ က Microsoft က နေ တိုက် ရိုက် လာ တာ ပါ။ သင့် အနေ နှင့် ငွေ ပေး ချေ ပြီး ကြောင်း လက် ခံ အ တည် ပြု ပြီး ပြီ ဆို တာ နဲ့၊ သင့် ဆီ ကို လက် ဝယ် ရောက် ရှိ လာ မှာ ပါ။
ဒီ Product Keys တွေ က ရော တ ရား ဝင် ပါ ရဲ့ လား ?
ဒါ ပေါ့ ဗျ။ ၁၀၀ % သော ဥ ပ ဒေ အ ရ ဘောင် ဝင် တဲ့ Product Keys အ စစ် အ မှန် တွေ ကို သာ ရောင်း ချ ပေး တာ ပါ။
ဒီ Product Keys တွေက Microsoft’s Window Genuine Advantage (WGA) အ တိုင်း ရ ရှိ မှာ လား ?
ဟုတ် ကဲ့ ခင် ဗျ။ Microsoft’s Window Genuine Advantage (WGA) အ တိုင်း သင် ခံ စား ခွင့် ရ မှာ ပါ။
အဲ့ ဒီ Product Keys တွေ က Activating လုပ် နေ တဲ့ အ ခါ၊ လိုင် စင် ထည့် မ ရ ပါ ဘူး ဟု Issues တွေ ပြ ပါ သ လား?
အဲ့ ဒီ အ ဖြေ က တော့ No! ပါ။ သင် ဝယ် ယူ ပြီး ကြောင်း၊ ငွေ ပေး ချေ ပြီး ကြောင်း စစ် ဆေး ပြီး တာ နဲ့၊ ဝယ် သူ တစ် ဦး ထဲ ကို ပဲ Email က နေ တစ် ဆင့် ပို့ ပေး သွား မှာ ပါ။ Activating လုပ် နေ စဉ် အ တွင်း မှာ အ ပေါ် က မေး ခွန်း ကဲ့ သို့ Error Issues လုံး ဝ ပြ မည် မ ဟုတ် ပါ ခင် ဗျာ။
ဒီ လိုင် စင် Keys တွေ က Microsoft ရဲ့ Product တွေ ကို Update လုပ် ခွင့် ပြု နိုင် ပါ သ လား ?
ရ တာ ပေါ့ ဗျ။ Windows Installation ပြီး လို့ သင့် ရဲ့ လိုင် စင် ကီး ကို Activated ဖြစ် ပြီး တာ နဲ့ Microsoft ရဲ့ Product တွေ ကို သင့် အ နေ ဘ ဝ တစ် သက် တာ လုံး Update လုပ် နေ ခွင့် ရ ရှိ မှာ ပါ။
Microsoft က ပေး တဲ့ နည်း ပ ညာ ပိုင်း ဆိုင် ရာ အ ထောက် အ ပံ့ တွေ ရော ရ ရှိ နိုင် မှာ လား ?
သေ ချာ ပေါက် ရ ရှိ နိုင် ပါ တယ်။ နည်း ပ ညာ ပိုင်း ဆိုင် ရာ အ ခက် အ ခဲ ရှိ ခဲ့ မယ်၊ ဆွေး နွေး ချင် တယ် ဆို ရင် လည်း၊ သင့် အ နေ ဖြင့် Microsoft ထံ သို့ အ ကြာင်း ကြား တာ နဲ့၊ သင့် အား Microsoft နည်း ပ ညာ ရဲ့ တာ ဝန် ရှိ သူ မှ၊ သင့် အား တိုက် ရိုက် ဖုန်း ဖြင့် ပြော ဆို ကာ ပြန် လည် ဖြေ ကြား ပေး မှာ ပါ။ ( ကဲ… အဲ့ ဒါ မ မိုက် ဘူး လား ဗျ ? )
ဝယ် ယူ ပြီး ရင် Software ကို ဘယ် လို ပို့ ပေး မှာ လဲ ?
သင် ၀ယ် ယူ ပြီး ပြီ ဆို တာ နဲ့ ကျွန် တော် တို့ ဘက် မှ ၁ နာ ရီ မှ – ၈ နာ ရီ အ တွင်း၊ သင့် Email ထဲ သို့ Product Keys နှင့် တ ကွ Download Link ကို ပါ ပေး ပို့ ထား မှာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဘယ် လို ငွေ ချေ မှု မျိုး ဝယ် ယူ လို့ ရ ပါ သ လဲ?
ကျွန် တော် တို့ ပြည် တွင်း ဘဏ် တွေ ဖြစ် တဲ့ AYA, KBZ, CB Banks တို့ မှ တစ် ဆင့် ငွေ လွှဲ ကာ ၀ယ် ယူ နိုင် မှာ ပါ။
PayPal အ ကောင့် ရှိ သူ များ အ နေ နှင့် လည်း ဝယ် ယူ နိုင် ပါ တယ်။
ငွေ လွှဲ ပေး ပို့ ရ မယ့် အ ကောင့် နံ ပါတ် များ က တော့
KBZ ACC : 99930799936557001 / KBZ ACC NAME : CHAN MYAE MAUNG
AYA ACC : 0075201010024471 / AYA ACC NAME : CHAN MYAE MAUNG
CB ACC : 0021600500031078 / CB ACC NAME : CHAN MYAE MAUNG
ငွေလွှဲပြီးတာနဲ့ ယခု (+95) 9795883549 Viber No. ကို ငွေပို့ထားကြောင်း၊ Screenshot နှင့်တကွ၊ အမြန်ဆုံးပေးပို့ထားပါ။ ပြီးတာနဲ့ သင့်ရဲ့ Email ကို ကျွန်တော်တို့ လိုင်စင်ကီး ၂၅ လုံးကို ဘောင်ချာနှင့်တကွ အများဆုံး ၁-၈ နာရီကြားအတွင်းမှာ ပေးပို့သွားမှာပါ။
IF YOU HAVE SOME PROBLEM YOU CAN CONTACT US :